ကိုကို နဲ့ ထွေးထွေ – ျမန္မာသတင္းစံု
Posted on April 28, 2021 Author admin	Comments Off on ကိုကို နဲ့ ထွေးထွေ
ကိုကိုရယ်” ပြွတ် ပလပ် စွပ် စွပ် ဖတ် ဖတ် “အဲဒါနဲ့ဆက်ပြောပါအုံးထွေးရယ်” “အာ ကိုကိုကလဲ ထွေးခဏ ခဏပြောနေတာကို ဟင့် နားထောင်လိုမဝသေးဘူးလား အင့် ဖတ် ဖတ် ပြွတ်” “အင်းပါထွေးရယ် ဒီတစ်ခါ အစကစပြောပြပါအုံး ထွေးရဲ့ဇတ်လမ်း ကလေးနားထောင်ရင်းထွေးကိုလိုးရတာအရသာရှိလွန်းလို့” “ဟင်း သူကဖြင့်ဒါဘဲ ဇတ်လမ်းအစကဒီလိုပါတဲ့ရှင်” “အဲဒီအချိန်က ထွေးတို့ဆီကိုအဲဒီလူကြီးပြောင်းမလာခင်ကထဲက အလုပ်ထဲက အမကြီးတွေပြောနေကြာတာကအဲဒီလူကြီးကဏှာဘူးကြီး တဲ့ ။
မိန်းမဆိုရင်ဘယ်မိန်းမမှမရှောင်ဘူးတဲ့ ဏှာတအားဘူးတာဘဲတဲ့ မန္တလေးကအလုပ်ထဲမှာတော့နာမည်ကြီးဘဲတဲ့ မိန်းမဆိုရင်အပျို အအို လင်ရှိရှိ မရှိရှိမရှောင်ဘူးတဲ့ ပြီးတော့သူက နည်းနည်းလေးအသက်ကြီး ပေမဲ့ အဲဒီဘက်မှာတအားသန်တာဘဲတဲ့ အဲဒီတော့ထွေးတို့အလုပ်ထဲကမိန်းမတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးခင်ကထဲကအရမ်းစိတ်ဝင်စားကြတာ သိလား ကို” “အား အဲ့ဒါနဲ့ထွေးကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အထဲပါတယ်ပေါ့လေ”
“အင့် ဖလွတ် ဗြွတ် ဖတ် ပြွတ် ပြွတ် အား ကောင်းလိုက်တာကိုရယ် ကိုလိုးတာကလည်း တမျိုးအရသာရှိတယ်နော် အင့် တချက်လောက် ခပ်ပြင်းပြင်းကလေးဆောင့်လိုက်စမ်းပါအုံး ကိုရယ် အင့် ဟင်းဟင်း” “ရော့ ရော့ အင့် ” ဖန်းဖန်း ပလွတ် စွပ် စွပ် ပြွတ် ဖတ် ဖတ် “အာ့ ကိုမေးထားတာဖြေအုံးလေ အဲဒီလူကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အထဲ မှာ ထွေးလည်းပါတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား” “ပါတာပေါ့ ကိုရယ် မိန်းမဆိုတာဘယ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ဏှာကြီးတဲ့ယောက် ကျားကိုသဘောကျကြတာဘဲ အခြေအနေအချိန်အခါအရကိုယ့်ဘာ သာချုပ်တီးပြီး ဟန်ဆောင်နေကြရတာ အစမထွက်နိုင်ဘူး လူမသိဘူး ဆိုရင် အဲဒီလိုလူမျိုးနဲ့ကြုံလိုက်ကြချင်သူတွေပါဘဲကိုကိုရယ်
ဟင့်” ပြွတ် ပလွပ် စွိ စွိ စွပ် စွပ် ဖတ် “အား ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ် စောက်ခေါင်းထဲကိုစိမ့်သွားတာဘဲ လိုးကိုကို လိုးလိုး အင့် အဟစ် ဟစ် အင့် ” “ပြီးတော့လေ မိန်မးတွေက လင်ရှိပေမဲ့ ကြာကူလီတွေဆိုသိပ်စိတ်ဝင်စားကြတာကိုကိုရဲ့ ငါ့ကိုများလာကြာခိုလေမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ လူမရိပ်မိအောင် အဲ့ဒီလူကိုကြာပစ်ရတာအမောဘဲ အဲဒီလူကသာ ဘယ်သူမှမသိအောင် ကျင်ကျင်လည်လည်ချဉ်းကပ်တတ်ရင်ပါလာတာဘဲ သိလား’ “ကဲပါ ထွေးကလဲ ထွေးအကြောင်းပြောပြအုံးလေ”
“” အင်း အဲဒါ ထွေးကလဲ ဘယ်နေမလဲစိတ်ဝင်စားမိတာပေါ့ ပြီးတော့ အဲဒီအချိန်က အိမ်ကလူကြီးကလည်းမလေးရှားမှာသွားအလုပ်လုပ်နေ တာ တနှစ်ကျော်ဆိုတော့ လိုချင်နေတာပေါ့ နောက်ပြီးထွေးက အလုပ်ကမိန်းမတွေထဲမှာဘော်ဒီအမိုက်ဆုံးလေ မိန်းမချင်းတောင် ပြောကြ တယ် ခါးလေးသေးပြီးရင်ကချီနေတာတဲ့ တင်ပါးလေးကလည်းကျစ် ပြီးလုံးလုံးလေးနဲ့ကားနေတာတဲ့ ထွေးကဆတ်တောက်ဆတ်တောက်နဲ့ လမ်းရှောက်သွားရင် အလုပ်ထဲကယောက်ကျားတွေရော ဧည့်သည် ယောက်ကျားတွေရော လိုက်ငမ်းနေကြတာဘဲတဲ့ ”
“အင်း ဆောင့်မောင် ဆောင့်ပေးစမ်းပါ အား အိုး နို့ကိုကိုင်လေ နို့ကိုကိုင် မိန်းမဆိုတာနို့ကြီး ၂ ဖက်ကိုဆွဲဆွဲလိုးပေးမှကြိုက်တာ အား ဟုတ်ပြီ လိုးလိုး အဲ့လိုနို့ဆွဲပြီးလိုးပေး အင့် အဟင့် ဟင့်” ” ရော့ ရော့ အင်း ကဲဆက်ပြောပါအုံးထွေးရဲ့” “အင်းပါ ဟင့် ဟင့် အဲဒါနဲ့ အဲဒီလူကြီးပြောင်းလာတော့ သူက အရပ် မြင့်မြင့်ဘော်ဒီတောင့်တောင့်နဲ့လေ ရုံးကဟာမတွေအကုန်သူ့ကိုအကုန်ဝိုင်းအထာပေးကြတာပေါ့ ထွေးလည်းပါတာပေါ့ သူအခန်းထဲ အလုပ်အကြောင်းပြပြီးခန ခနဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတာ ထွေးကလည်းမိန်းမချင်းကတောင် ငေးကြည့်ရလောက်အောင်ဘော်ဒီ လှတော့သူကအပျိုမှတ်နေတာတဲ့ အဟင်းဟင်း နောက်ပိုင်းကျတော့အခြားကောင်မတွေကလူတွေရိပ်မိမှာစိုးပြီး သူနဲ့ သိပ်အရောမဝင်ရဲတော့ဘူးသိလား ထွေးကတော့ လူကလည်းငတ် နေတာကြာပြီဆိုတော့ ခပ်တည်တည်ဘဲသူ့အခန်းထဲဝင်ထွက်နေတာ ပေါ့
လူနည်းနည်းလစ်ရင်ပွတ်သီးပွတ်သပ်လေးလည်းလုပ်ပေးလိုက် တယ်လေ အား အင့် အင့် ကောင်းတယ်ကွာ လိုးကွာ လိုး သေကိုကိုကတော့လေ ဒီကောင်မပလူးတဲ့အကြောင်းများနားထောင်ရင် လိုးရရင်လီးကြီးတအားမာတောင်လာတာဘဲ လုံးပတ်ကလည်းပိုတုတ် လာသလိုလိုဘဲ အဟင့် ဟင့် အမလေး စောက်ပတ်ထဲကလည်း စောက်ရည်တွေအရမ်းထွက်လာပြီ အား တဗြစ်ဗြစ် တဗြိဗြိနဲ့ အား လိုး ကိုကို လိုး အား ဟင်း ကောင်းလိုက်တာ ဟင်း ” ထွေးထွေးမှာခရိုင်မြို့ကြီးတမြို့၏လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေ ပြီးအိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ယောက်ကျားမှာမလေးရှား အလုပ်ထွက်လုပ်နေသည်မှာ ၂ နှစ်ကျော်ကျော်ရှိပြီဖြစ်သည့်အပြင် အသက်ကလည်း ၂၈ နှစ်သာရှိသေးသဖြင့်သွေးသားထကြွသောင်းကျန်းသောအရွယ်ကောင်းဖြစ်လေသည်။
သမီးတစ်ယောက်မွေးပြီးပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကျသွားခြင်းမရှိဘဲတသားမွေးတစ်သွေးလှဆိုသကဲ့ သို့ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတောင့်တင်းလာသလို ဖွံ့ဖြိုးလာသောအသွေးအသားများမှာ ပိုမိုသောင်းကျန်းလာလေသည်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှဆူပွက်လာသော ကာမဆန္ဒများကိုအစပိုင်းတွင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်းတနှစ်ကျော်ကြာ လာသောအခါ ဘယ်လိုမမထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ဘဲသွေးသားအလိုလိုက်ခါ အလုပ်ထဲမှလူကြီးတစ်ယောက်နှင့်မှောက်မှားမိလေသည်။ထွေးထွေး ကိုယ်တိုင်ကလည်းသွေးသားထကြွသောင်းကျန်းနေသဖြင့် ထိုလူကြီး နှင့်အလွယ်တကူ အလိုးခံလိုက်မိခြင်းဖြစ်လေသည်။
ထိုလူကြီးနှင့် ၆ လခန့် တိတ်တိတ်ပုန်းလင်ငယ်နေခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်အလုပ်ထဲမှလူများရိပ်မိသလိုလိုဖြစ်လာသဖြင့် ၂ ယောက်သားအရှိန်သတ်ခါခပ်ခွါခွါနေကြရပြန်လေသည်။ ဤတွင်လင်ငယ်နေရသောအရသာကိုသိသွားပြီဖြစ်သောထွေးထွေးတစ် ယောက် ဘယ်လိုမှမအောင့်အည်းနိုင်တော့ဘဲ ယခုကိုကိုနှင့်ထပ်မံ၍ ခိုးကုန်းနေခြင်းဖြစ်လေသည်။နောက်ပိုင်းတွင်ကိုကိုကထွေးထွေးကို တက်လိုးရင်း ထွေးထွေး၏အရင်နောက်မီးလင်းဇတ်လမ်းကိုမေးတတ် လေသည်။ထိုသို့ထွေးထွေးကအလုပ်ထဲမှလူကြီးနှင့်လင်ငယ်ဇတ်လမ်း ကိုပက်ပက်စက်စက်ပြောပြရင်းအလိုးခံသည့်အခါ ကိုကို၏လီးကြီးမှာ ပိုမိုမာကြောတောင်ထလာပြီး အလိုးခံရသည့်အရသာပိုကောင်းလာ သည်ကိုသတိထားမိသဖြင့်ပြောပြောပြမိလေသည်။
သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ထိုသို့လင်ငယ်နေခဲ့သည့်ဇတ်လမ်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြ ရင်းအလိုးခံရသည်မှထိထိမိမိအရသာရှိလှသည်ဟုထင်လေသည်။ ယခုတော့ ကိုကိုနှင့်ထွေးထွေးမှာပုံစုံပြောင်း၍လိုးနေကြပြီ ထွေးထွေးက ကုတင်ပေါ်တွင်ဒူးတုတ်၍ဖင်ဗူးတောင်းထောင်ပေးထားပြီးမျက်နှာကို ခေါင်းအုံးပေါ်အပ်ထားလေသည်။ထို့ကြောင့်တင်ရင်းစွင်းကားသော ဖင်ကြီး ၂ လုံးမှာနောက်သို့ကောက်တက်နေပြီးဖင်ကြီး ၂ လုံးကြားမှ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကြီးမှစောက်ရည်တရွှဲရွှဲဖြင့်ပြဲအာနေသော ကြောင့်စောက်ခေါင်းအတွင်းသားနီနီရဲရဲများကိုပင်မြင်တွေ့နေရလေသည်။ကိုကိုသည် တောင့်တင်းဖွံ့ဖြိုးလှသောထွေးထွေး၏ဖင်ကြီး ၂ လုံး ကိုကျေနပ်အားရစွာဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ပေးရင်း သူ၏မာကြောတောင်ထ နေသောလီးကြီးကို ထွေးထွေး၏စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ခပိပြင်းပြင်း ဆောင့်လိုးပေးလိုက်လေသည်။
“စွပ် ပြွတ် ဗြတ် ဒုတ် အောက်မလေးအောင့်တယ် ကိုကိုရဲ့ စောက်ပတ်ကြီးအောင့်တယ် အား ဟား ဟား ဟိုအထဲထဲထိအောင့်တက်သွားတာဘဲ အာ့လားလား ထိတယ် တအားထိတာဘဲ အင်းဟင်း ဟင်း ကောင်းလိုက်တာနော် အောင့်သွားပေမဲ့အဲဒီလို ထိထိမိမိအလိုးခံ လိုက်ရတာကိုကြိုက်တယ် အင်း အဟင်း ဟင်း” ထွေးထွေးမှာကုန်း၍ဖင်ဗူးတောင်းထောင်ပေးထားစဉ်ကိုကိုက နောက်မှ အားဖြင့်ပစ်ဆောင့်လိုးလိုက်သဖြင့် လီးထိပ်ဖြင့်သားအိမ်ခေါင်းဆောင့် မိသဖြင့်အောင့်သက်သက်ဖြစ်သွားသော်လည်း ထိုအောင့်သက်သက် အရသာကိုပင်အားရကျေနပ်မိခါ သူမ၏ဖင်တုံကြီးကိုပင်နောက်သို့ပစ် ကော့ပေးပြီးစိတ်တိုင်းကျအလိုးခံနေလေသည်။
“ဗြွတ် ဗြစ် ဗြိ ဗြိ စွပ် ဒုတ် အား အိ အင်း အူး ” ထွေးထွေးမှာခေါင်းအုံးပေါ်တွင် မျက်နှာအပ်ထားရင်းခေါင်းအုံးထောင့် စွန်း ၂ ဖက်ကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်းရင်းနှုတ်ခမ်းကလေးကိုက်၍အစွမ်း ကုန်အလိုးခံနေလေသည်။ထွေးထွေး၏မျက်နှာကလေးမှာပြင်းပြသော ရာဂသွေးအရှိန်ကြောင့်နီမြန်းနေပြီး ချွေးစေးများပင်ပြန်နေလေပြီ။ ထွေးထွေးမှာ ကနေ့ညဂျူတီရှိသည်ဟုဆိုကာ လေးနှစ်အရွယ်သမီး လေးနှင့်ကလေးထိန်းအဒေါ်ကိုယောက္ခမအိမ်ပို့ထားပြီး ညဆယ်နာရီခန့်တွင်အလုပ်မှပြန်လာ၍တိတ်တိတိပုန်းချစ်သူ ကိုကို ကို အိမ်နောက် ဖေးမှသွင်းကာ စိတ်ချလက်ချနောက်မီးလင်းနေခြင်းဖြစ်လေသည်။
ကိုကို ကုန်းပေးထားသောထွေးထွေး၏ခါသိမ်သိမ်လေးကိုဆွဲ၍အားရပါး ရဆောင့်လိုးနေရင်း ” ကဲဆက်ပါဦး အဲဒီလူကြီးကိုထွေးထွေးကပွတ်တီးပွတ်သပ်လုပ်ရင်း ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ ကိုကလေ ထွေးထွေးရဲ့တိတ်တိတ်ပုန်း ဇတ်လမ်းတွေနားထောင်ရင်း လိုးရတာပိုအရသာရှိတယ်ထွေးရဲ့” “အဟင့် သိသားဘဲ ထွေးကလည်းလေ ဟို ယောက်ကျားတစ် ယောက်နဲ့လိုးပေးတာခံရင်းတခြားတစ်ယောက်နဲ့အလိုးခံခဲ့တာကို ပြန်ပြောပြရတာ အရသာ သိပ်ရှိတာဘဲ အစ် အဟစ်ဟစ် အား ဗြွတ် ဖတ်” ထွေးထွေးသည် စောက်ခေါင်းအတွင်းလီးအဝင်ပိုနက်စေရန် ဖင်ဗူး တောင်းထောင်ထားသောဖင်ကိုနောက်သို့ေ့ပးလိုက်ရင်း ” အင့် စွပ် ဖတ် အဲဒါလေ အဲဒီလူကြီးကလူလည်ကြီးဘဲ ထွေးကနည်းနည်းလေးအထာပေးလိုက်တာနဲ့ သူကအပိုင်ကပ်လာတာဘဲ တစ်နေ့သူ့ရုံးခန်းထဲစာရင်းစာရွက်သွားပေးတော့လေ သူကထွေးကို ဖက်ပြီးအတင်းကစ်ဆင်းဆွဲတော့တာဘဲ သူ့ရုံးခန်းကလိုက်ကာချထား ရင်အပြင်ကမမြင်ရဘူး သိလား
အဲဒါနဲ့သူကဖက်နမ်းလိုက်တော့ထွေး လည်းရင်တွေခုန်လိုက်တာလေ သူကအရပ်မြင့်တော့ ထွေးကခြေဖျား လေးထောက်ပြီးနှုတ်ခမ်းစုပ်ခံရေတာပေါ့ သူကလည်းလေ လည်တယ် သိလား ထွေးပါးစပ်ထဲကိုသူ့လျှာကြီးထိုးထည့်ပြီးလျှာချင်းအတင်းပွတ်ဆွဲတော့တာဘဲ သူကလေ သူကနှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ရင်း ထွေးတင်ပါးတွေ ကိုဖြစ်ညှစ်စုပ်နယ်ပေးနေတာ ထွေးကလည်းမမှီမကမ်းနဲ့ခြေဖျားလေး ထောက်ပြီးသူ့ကျောပြင်ကြီးကိုသိုင်းဖက်ထားတာပေါ့ ရင်တွေကလည်း တလှပ်လှပ်နဲ့ ထွေးကလည်းယောက်ကျားမလေးရှားအလုပ်သွား လုပ်တာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဆိုတော့ သူနဲ့တွေ့ရတာအသစ်အဆန်း ဘဲ ဟိုဟာလေးကိုရွှဲလာတာဘဲ သိလား အင့် အား ရှီး ဟား ကိုကို တအားဆောင့်တာဘဲ အား ကောင်းတယ်ကိုကိုရယ် အား လိုးလိုကစမ်းပါ အင်း ထိတယ်ကွာ အရမ်းဘဲ အွတ် အင့် အား” ထွေးထွေးပြောတာနားထောင်ရင်း ကိုကိုမှာဒိန်းဒလိန်းနတ်ဖမ်းကာ တဏှာကြွလာသဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်းလိုးဆောင့်လိုက်ရာထွေးထွေးမှာ လည်း အထိကြီးထိကာအကောင်းကြီးကောင်းသွားရလေသည်။ ထွေးထွေးကချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ကာလည်ချောင်းရှင်းရင်သူမ၏ နောက်မီးလင်းဇတ်လမ်းကိုဆက်ပြောလေသည်။
” အဟမ်း အဲဒါနဲ့ ခဏနေတော့ သူကနှုတ်ခမ်းချင်းခွါပြီး လာမဲ့စနေ နေ့ အလုပ်မှာ အိုဗာတိုင် ရှိတယ်တဲ့ တကယ်တော့ထွေးက အဲဒီ အိုဗာတိုင်ရှစ် မှာမပါဘူး ။အဲဒါသူက စနေနေ့ နေ့လည်ထမင်းစားချိန် လာခဲ့ပါလားတဲ့ ။သူထမင်းစားမပြန်ဘဲစောင့်နေမယ်တဲ့ သိလား နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ဆိုအများကအိမိပြန်စားကြတော့လူရှင်းတယ် လေ တကယ်တော့ သူလည်းနေ့လည်ထမင်းစားချိန်ဆိုအိမ်ပြန်စား နေကြပါ ဒါပေမဲ့အဲဒီစနေနေ့မှာသူအိမ်ပြန်ထမင်းမစားတော့ဘူး တဲ့ အင့် အား ကိုကိုရယ် တစ်ချက်လောက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ပေး လိုက်စမ်းပါဦး
အင့် အဟစ် ဟစ်” “ဘွတ် ဘွတ် ပြွတ် စွပ် စွိ စွိ အား အခြားတစ်ယောက်နဲ့အလိုးခံတာ ကိုပြောရင်းနောက်တစ်ယောက်နဲ့အလိုးခံရတာ အရသာရှိလိုက်တာ ကွာ အား အင်း ကိုကို ခန ကိုကို ကိုကိုပက်လက်လှန်အိပ်လိုက် တော့ ထွေးအပေါ်ကတက်ဆောင့်ဦးမယ် ပြောရင်းနဲ့စိတ်တအားထလာပြီ ထွေးအပေါ်ကတက်ဆောင့်ချင်လာပြီ အား အူး အီး” ကိုကိုကလည်း ထွေးထွေးပြောသည့်အတိုင်းအိပ်ရာပေါ်တွင်ပက်လက် လှန်ပေးလိုက်သည်။
သူ၏တောင်ထမာကြောနေသောလီးကြီးမှာထွေး ထွေး၏စောက်ရည်များဖြင့်စိုရွှဲပြောင်လက်နေလေသည်။စောက်ရည်များ အများအပြားထွက်နေသဖြင့်လိုးရာတွင်တစ်ချက်တစ်ချက်ချောချော နေသောကြောင့် ထွေးထွေးကချွတ်ချထားသော ထမီကိုယူကာကိုကို ၏လီးကြီးကိုပြောင်စင်အောင်သုတ်ပေးလိုက်လေသည်။ထို့နောက်သူမ ၏စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ထမီစကိုလုံးထွေးထည့်လျက်ရွှဲနစ်နေသော စောက်ရည်များကိုသိုပစ်လိုက်၏။ ထို့နောက်ပက်လက်လှန်အိပ်နေသောကိုကို့အပေါ်သို့ကားယားတက်ခွ လိုက်ပြီး ကိုကို၏ထောင်မတ်နေသောလီးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ကာ စောက်ပတ်အဝတွင်တေ့လိုက်ပြီးတအိအိထိုင်ချလိုက်လေသည်။
လီးကြီးစောက်ခေါင်းအတွင်းသို့တထစ်ထစ်တိုးဝင်သွားသည်နှင့်ထွေး ထွေးမှာခေါင်းကလေးမော့ကာပါးစပ်ကလေးဟလျက် စောက်ခေါင်းထဲ လီးဝင်သောအရသာကိုတစိမ့်စိမ့် ဖီးယူနေလေသည်။လီးကြီးစောက် ခေါင်းတဆုံးဝင်သွားပြီးလီးထိပ်ဖြင့်သာအိမ်ခေါင်းကိုတေ့ထောက်ထား ကာဖင်ကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် အသာကပ်ပွတ်ပေးနေလေသည်။ လီးထိပ်ကသားအိမ်ခေါင်းကိုတေ့ထောက်ထားစဉ်ဖင်ကိုလှုပ်ပေးနေ သဖြင့်စောက်ခေါင်းအတွင်းမှတထုတ်ထုတ်ဖြင့် အရသာတွေ့နေရသလို စောက်စိလေးမှာလည်း လီးအရင်းနှင့်ဖိကပ်ပွတ်ကြိတ်မိနေသဖြင့် ကာမအရသာကို ၂ ထပ်ကွမ်းခံစားရရှိနေလေသည်။ ” အာ့ အင့် အဟစ် အား စောက်ခေါင်းထဲကကောငိးလည်းကောင်း တယ်
စောက်စိလေးကလည်းအယားကိုပြေသွားတာဘဲ အင့် အဟစ် ဟစ်” “အင်းပါထွေးရယ် ကို့လီးထိပ်ကြီးကလည်း ထွေးသားအိမ်ခေါင်းကိုတေ့ ပွတ်နေရတာတထုတ်ထုတ်နဲ့ အရိုးနုလေးကိုက်ရသလိုဘဲ အရမ်းအရ သာရှိတာပါဘဲကွယ် ကဲပါ ထွေးဇတ်လမ်းကလေးဆက်ပါအုံး အဲဒီ ချိန်းတဲ့စနေနေ့ရောက်တော့ …” “အင်းပါ စနေနေ့ရောက်တော့ထွေးရေချိုးပြီးထမင်းစောစောစားတာပေါ့ ရေချိုးရင်းနဲ့တကိုယ်လုံးအကြိုအကြားပါမကျန် ပွတ်တိုက်ဆေးကြော သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားတာပေါ့ ဒီလူကြီးကဏှာဘူးကြီးတဲ့ ဏှာဘူး ကြီးဆိုတော့ ကနေ့ငါ့ကိုခေါ်ထားတာဘာလုပ်မလို့လဲမသိဘူးလို့ပေါ့။ စဉ်းသာစဉ်းစားနေတာပါ။ထွေးစိတ်ထဲကသိနေတယ်သိလား။ဘာကို သိနေတာလဲဆိုတော့အလိုးခံရတော့မယ်ဆိုတာသိနေတာပေါ့။
အလိုး မခံရတာလည်းတစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဆိုတော့ သွားချိန်နီးလာတာနဲ့ထွေး စောက်ပတ်ကလည်းရွလာတာပေါ့။သိလားကို။ အဲဒါနဲ့အလိုးခံရရင်လွယ်အောင် အတွင်းခံဘောင်းဘီမဝတ်တော့ဘူး အစက စကပ်တစိထည်ထမီအောက်ကခံဝတ်သွားမယ်စိတ်ကူးမိပေမဲ့ အို ရှုပ်ပါတယ် ပိုလွယ်အောင်ဆိုပြီး ထမိန်နည်းနည်းထူတာကိုတထပ် တည်းဝတ်သွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့သနပ်ခါးပါးပါးလေးအောက်ကခံ ပြီးအပေါ်ကမိတ်ကပ်တွေဖွေးနေအောင်လူးသွားလိုက်တယ်။နှုတ်ခမ်းနီ လည်းရဲနေအောင်ဆိုးသွားမိတယ်။မနက်ကဈေးသွားရင်းဝယ်လာတဲ့ စပယ်ပန်းတွေလည်းပန်သွားတာပေါ့။အဲဒါနဲ့ ၁၁ နာရီခွဲလောက်ကျ လက်ကိုင်အိတ်ထဲမိတ်ကပ်ဗူး နှုတ်ခမ်းနီတောင့်နဲ့အခြားဘီးတို့ဘာတို့ တိုလီမိုလီတွေထည့်ပြီး အလုပ်ရှိရာကိုဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ထွက်လာမိတယ်။”
ထွေးထွေးသည်ပြောရင်းဖြင့်စိတ်ထကြွလာသည်ဖြစ်သဖြင့် ကိုကို့ရင် ဘတ်ပေါ်လက်ထောက်၍ဖင်ကလေးမြှောက်ခါမြှောက်ခါ့်လီးကြီးကို စောက်ပတ်ဖြင့်ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။ပြေကျနေသော ထွေးထွေးဆံပင်များမှာဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်းကျောပေါ်တွင်လွင့်ဝဲနေ လေသည်။ ဆီးခုံခြင်းရိုက်သံမှာတိတ်ဆိတ်သောအခန်းတွင်းဝယ် တဖန်းဖန်းဖြင့် ထွက်ပေါ်နေသလို စောက်ရည်ပြည့်နေသောစောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ လီးဝင်လီးထွက်သံများမှာလည်းတဗြွတ်ဗြွတ်ဖြင့်ဆူညံစွာထွက်ပေါ် နေလေသည်။
ထွေးထွေးသည်ကိုကိုရင်ဘတ်ကိုလက်ထောက်၍ဖင်ကိုမြှောက်ခါမြှောက်ခါ တက်လိုးညှောင့်ပေးနေရာမှမောဟိုက်သွားဟန်ဖြင့် ဖင်ထိုင်ချကာစောက်ခေါင်းအတွင်းလီးတဆုံးထည့်၍လှုပ်ရုံကလေး လှုပ်ခါကပ်ပွတ်ပေးနေပြန်သည်။ထို့နောက် “အဲဒါ အလုပ်ထဲကိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတော့ ထွေးကတအားလိုချင်နေလို့ လားမသိဘူး စောက်စေ့နဲ့ဆိုင်ကယ်ကုန်းကပ်ပွတ်မိတာနဲ့တအားရွလာ တာဘဲ။အရည်လေးတွေတောင်စိုလာတယ်သိလား” ထွေးထွေးညိမ့်ညိမ့်ကလေးလှုပ်၍ပွတ်ပေးရင်းသူမ၏တိတ်တခိုးကာမ ဇတ်လမ်းကိုဆက်ပြောပြနေသည်။ကိုကိုကလည်းအောက်မှနေ၍တွဲလဲ ကျနေသောထွေးထွေး၏နို့ကြီးများကိုပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ရင်းကမာတောင် နေသောနို့သီးခေါင်းကလေးများကိုလက်မနှင့်လက်ညိုးညှပ်၍အသာအ ယာပွတ်သပ်ပေးနေလေသည်။
“အဲဒါနဲ့အလုပ်ထဲကိုရောက်တော့ ထမင်းစားပြန်ကြတာနဲ့လူအတော် ရှင်းနေပြီ။ထွေးကသူ့ရုံးခန်းတံခါးတွန်းဖွင့်ဝင်သွားတော့သူကစားပွဲမှာထိုင်နေရာက မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ပြီး ထွေးကိုတံခါးကိုချက်ချပြီးပိတ်ထားလိုက်တဲ့။တိုးတိုးလေးလှမ်းပြောတယ်။ပြီးတော့ကုလားထိုင်နဲ့ခံ ထားလိုက်တဲ့ ။ထွေးကတံခါးပိတ်ပြီးပြန်လှည့်လိုက်တော့လေ သူက သိပ်ရဲတာဘဲ။ပုဆိုးကြီးချွတ်ချလိုက်တယ်။အဲဒါလေ သူကလည်း အောက်ခံဘောင်းဘီမပါတော့ ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်တာနဲ့သူလီးကြီးက ငေါက်တောက်ကြီး သိလား။ပြီးတော့လည်းလေ သူ့လီးကဒစ်ကြီးကပြဲ လန်ပြုတ်ထွက်နေတာ။ဒစ်အရာတောင်သိပ်မပေါ်တော့ဘူး။
အဟီး သူ့လီးကြီးကမိန်းမတွေကိုတော်တော်လိုးထားတယ်နဲ့တူတယ် သိလား ” ထွေးထွေးကပြောရင်းကကိုကိုအပေါ်တွင်ဖိကပ်ပွတ်ကြိတ်နေရာမှ ဆောင့်ကြောင့်ပြောင်းထိုင်လိုက်ရင်း တဖြနိးဖြန်းဆောင့်လိုးလိုက်ပြန် သည်။ရွှဲရွှဲစိုအောင်တစိမ့်စိမ့်ယိုစီးကျလာသောထွေးထွေး၏စောက်ရည် များကား ပက်လက်လှန်ထားသောကိုကို၏လီးအရင်းတွင်အိုင်ထွန်းနေ လေပြီ ။ကိုကိုကလည်းခါးကိုကော့၍အောက်မှပြန်လည်ဆောင့်ပေးရင်း ” အား ထွေးပြောတာနားထောင်ရင်းလိုးကြရတာအရမ်းအရသာရှိတာ ဘဲကွာ အဲဒါနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ကြသေးလဲ ဆက်ပြောပြပါအုံးထွေး ရယ်” ထွေးထွေးကကိုထွေးလီးပေါ်ဆောင့်ကြောင့်ထိုက်၍သူမ၏စောက်ပတ် ဖြင့်ကားယားခွလိုးနေရင်း သူမ၏နို့အုံများကိုသူမဘာဆုပ်နယ်ချေမွရင်း ခေါင်းကလေးမော့ကာဆက်ပြောပြန်လေသည်။
“အဲဒါနဲ့ သူကပုဆိုးကြီးချွတ်ပြီးတာနဲ့လီးကြီးငေါက်တောက်နဲ့ထွေးအနား ကိုကပ်လာပြီးထွေးနှုတ်ခမ်းကိုအတင်းစုပ်နမ်းတော့တာဘဲ။ အား အဲဒါထွေးကလည်းခြေဖျားထောက်ပြီးသူနှုတ်ခမ်းစုပ်တာခံရင်း နဲ့ထွေး လက်ကလေ သူ့လီးကြီးကိုအလိုလိုသွားကိုင်မိတယ်သိလား။ လီးချောင်းကြီးကို ကိုင်ပွတ်ပေးလိုက် သူ့ဂွေးစိကြီးတွေကိုကိုင်ဆုပ်လိုက်နဲ့လေ ထွေးစောက်ပတ်ထဲကလည်း စောက်ရည်တွေထွက်လာတာအများကြီးဘဲ သိလား ဟင်း အဟင့် ဟင့်” ထွေးထွေးမှပြောရင်းဖီလင် တက်လာဟန်ဖြင့်ခပ်ပြင်းပြင်းလေး အပေါ်မှစောက်ပတ်ဖြင့်ဆောင့်လိုးလိုက်ပြန်သည်။
“အဲဒါနဲ့ သူ့လီးကြီးကလည်းထွေးကိုင်လိုက်တော့မှမတရားတောင်ထလာတာဘဲ အင့် ထွေးလက်ထဲမှတဆတ်ဆတ်နဲ့ သိလား။ပြီးတော့ သူကထွေးကိုနှုတ်ခမ်းစုပ်ရင်းနဲ့အနားက ညဂျူတီကျရင်သူအိပ်တဲ့ကု တင်ကြီးပေါ်တွန်းလှဲလိုက်တယ်။ထွေးကလည်းကုတင်ပေါ်ပက်လက် ကြီးဖြစ်သွားတော့ ထမီလေးကိုမပြီး ခါးပေါ်တင်ပေးလိုက်မိတယ် ဟင့် ဟင့် ထွေးကလဲလေ ဟင်း အတွင်းခံမပါတော့ သူကထွေးဟာ လေးကိုသေချာကြည့်ရင်း ကုတင်ပေါ်ကိုလီးကြီးတန်းလန်းနွှဲတက်လာ တာပေါ့ သူကထွေးဒူးတွေကိုထောင်ပေးပြီးပေါင် ၂ လုံးကိုတဖက်တချက်ဖြဲပေးလိုက်တယ်။ထွေးကတော့ရှက်လို့မျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ် ထားတာပေါ့။
ရင်ထဲကတော့တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ကင်းကွာ နေတဲ့ ကာမအရသာကိုရတော့မယ်လို့ပီတိဖြစ်နေတာပေါ့ ပြဲအာနေတဲ့ ထွေးစောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကို သူကလီးကိုလက်နဲ့ကိုင် ပြီးလီးထိပ်ကြီးနဲ့ပွတ်ဆွဲနေတာ ဟင်း အင်း ထွေးစောက်ပတ်ကတော့ စောက်ရည်တွေရွှဲသထက်ရွှဲနေပြီ” ထွေးထွေးသည်မောသွားဟန်ဖြင့်အဆောင့်ရပ်လိုက်ပြီးကိုကို့အပေါ် သို့မှောက်ချလိုက်ခါ ကိုကို့ရင်ဘတ်တွင် ပါးတခြမ်းအပ်ထားလိုက်သည် စောက်ခေါင်းထဲအချောင်းလိုက်ဝင်နေသော ကိုကို၏လီးချောင်းကြီးကို တော့သန်မာသော စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများဖြင့်ရစ်ပတ်စုပ်ယူ ပေးနေလေသည်။
“အဲဒါနဲ့သူကလီးထိပ်ကြီးနဲ့ထွေးရဲ့စောက်စိလေးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက် တို့လိုက်တော့ထွေးကဖင်ကြီးကော့ပေးလိုက်မိတာပေါ့ အဲဒီအချိန်မှာသူ ကသူ့လီးကြီးနဲ့ထွေးစောက်ခေါင်းထဲလိုးထည့်လိုက်တော့တာဘဲ။ ထွေးစောက်ပတ်ကလည်းစောက်ရည်တွေနဲ့ရွှဲနေတော့သူ့လီးကြီးက ဗြွတ်ခနဲ ထွေးစောက်ခေါင်းတဆုံးဝင်သွားတာပေါ့ ကိုကိုရယ် ဟင်း အင်း အင်း” ထွေးထွေးကတံတွေးတစ်ချက်မျိုချလိုက်ရင်းဆက်ပြောပြန်လေသည်။
“သူ့လီးကြီးထွေးစောက်ခေါင်းထဲဝင်သွားတာနဲ့ ထွေးလည်းမနေနိုင် တော့ဘူး ထွေးဖင်ကြီးကိုကော့ပေးပြီးခြေထောက် ၂ ဖက်နဲ့သူခါးကြီး ကိုတအားဆွဲချိတ်ပြီးကပ်ထားလိုက်တာပေါ့ သူ့မှာလှုပ်တောင်မလှုပ် နိုင်တော့ဘူး အဲဒီအချိန်မှာထွေးကတအားရွနေပြီဆိုတော့ သူ့ခါးကို အတင်းဆွဲချိတ်ကပ်ထားပြီးစောက်ခေါင်းထဲကသူ့လီးကြီးကိုတအား ညှစ်ပေးနေတာပေါ့ ဟင်း” ထွေးထွေးသည်ကိုကို့ရင်ဘတ်ထဲမှခေါင်းထောင်ထလာပြန်ပြီးဖင်က လေးလှုပ်ခါလှုပ်ပွတ်ကြိတ်ညှောင့်နေပြန်လေပြီ။အရင်းတုန်းကအလိုး ခံခဲ့သည်များကိုပြောပြရင်းအခုလိုနောက်လီးတစ်ချောင်းနှင့်လိုးဇတ်ခင်း နေရသည်မှာအလွန်အရသာရှိလှသည်ဟုထင်မိလေသည်။ထို့ကြောင့် ဆကျ၍ “အဲဒါ သူကသူ့ခါးကို တအားချိတ်ညှပ်ထားတော့ အားထွေးရယ် ထွေး စောက်ပတ်ကြီးဖြဲပေးပါ ဖြဲပေးပါ လို့ပြောပြီးသူ့လီးကိုအတင်းပြန်ဆွဲထုတ်တာပေါ့ ။
အဲဒီတော့မှထွေးကလည်းသူ့ခါးကိုချိတ်ထားတဲ့ခြေ ထောက် ၂ ချောင်းကိုခွါပြီးပေါင် ၂ ဖက်ကိုကားပေးလိုက်တာပေါ့ ခြေထောက်တွေကိုအစွမ်းကုန်ကားထားပြီးအပေါ်ကိုထောင်ပေးလိုက် တယ်။ပြီးတော့ ထွေးစောက်ဖုတ်ကြီးဖြဲပေးထားပြီ ဦးလိုးသာထည့် လိုက်တော့ ထွေးစောက်ဖုတ်ကြီးကိုတအားသာဆောင့်လိုးပေးပါ လိုးပေးပါ လို့အော်ပြောတော့တာပေါ့။သူကလည်းလိုးသလားမမေးနဲ့ တစွပ်စွပ်တဖတ်ဖတ်နဲ့ အားကုန်ဆောင့်လိုးတာဘဲ သိလား အား အင်း” ထိုနေရာအရောက်တွင်ကိုကိုသည်အပေါ်ကစောက်ပတ်ဖြင့်တက် ဆောင့်နေသောထွေးထွေးကိုဘေးသို့တွန်းလှဲလိုက်ပြီး ထွေးထွေး၏ ခြေထောက် ၂ ချောင်းကိုပခုံးပေါ်ထမ်းတင်ကာနို့ကြီးများကိုဆွဲ၍တဖန် ဖန်းဆောင့်လိုးလေတော့သည်။ကိုကို မှာထွေးထွေး၏နောက်မီးလင်း ဇတ်လမ်းကိုနားထောင်ရင်လီးရည်ပန်းချင်လာပြီဖြစ်လေသည်ဒါကို ထွေးထွေးကလည်းသိပါသည်။
သူမကိုယ်တိုင်လည်းသူမဇတ်လမ်းကို သူမဇတ်ကြောင်းပြန်ရင်းကာမအဆိပ်တက်ခါအထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်လုနီးပြီဖြစ်နေလေသည်။ထို့ကြောင့် ဆက်၍ “အဲဒါနဲ့ကိုကို သိလား ထွေးကစောက်ပတ်ကြီးလည်းအသကုန်ဖြဲ ကားပေးလိုက်ရောသူကတဖုန်းဖုန်းနဲ့ဆောင့်လိုးတာဘဲ သိလား အာ့ အဟင့် ဟင့် သူကတအားအလိုးသန်တာဘဲ သိလား ပြီးတော့ သူ့လီးရည်တွေကအများကြီးဘဲ ထွေးစောက်ခေါင်းထဲကိုဒလဟော ပန်းထည့်လိုက်တာ လီးရည်တွေကစောက်ခေါင်းထဲက လျှံကျလာပြီး ဖင်ကြားထဲတလိမ့်လိမ့်နဲ့စီးကျလာတာ ယားကျိကျိနဲ့ သိလားကိုကို ထွေးစောက်ပတ်ကြီးကလည်းရှုံ့ပွရှုံ့ပွနဲ့သူ့လီးကြီး ကိုညှစ်ပေးရင်း စောက်ရည်တွေပန်းထွက်ကုန်တာပေါ့ အင်း အဟင်း ဟင်း” ထိုအချိန်တွင်ကိုကိုသည်လည်းသူ၏လီးရည်များကိုထွေးထွေး၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ပန်းထည့်နေပြီဖြစ်သလိုထွေးထွေးမှာလည်းကာမ အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တော့သည်။
ထွေးထွေးက ပြီးဆုံး ခြင်းကာမအရသာကိုတစိမ့်စိမ့်ခံစားရင်း သူမပြောပြနေသောဇတ်လမ်း ကိုလည်းဤသို့အဆုံးသတ်လိုက်လေ၏။ “အဲဒီတော့ ထွေးတို့နှစ်ယောက်လိုးပြီးတာနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ် ယောက်ဖက်ရကိသားကြီးခဏမှိန်းနေတာပေါ့။နောက်မှသူ့လီးကြီးက တဖြေးဖြေးပျော့လာပြီး ထွေးစောက်ခေါင်းထဲကပြွတ်ခနဲထွက်သွား တော့မှထပြီးထမီကိုပြင်ဝတ်ရတယ်။နောက်တော့ထွေးလည်းအလိုးခံ ပြီးသူ့အခန်းထဲကခပ်တည်တည်ထွက်လာတာပေါ့။အား ဟား ဟား သူ့လီးရည်တွေကအများကြီးဘဲ။
ထမီကြီးတစ်ထည်လုံးကိုရွှဲနစ်သွား တာဘဲ။အိမ်ရောက်လို့ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကဆင်းတော့ ဆိုင်ကယ်ကုန်း တစ်ခုလုံးလည်းစိုရွှဲနေတာဘဲသိလား ဟင်းဟင်း ” ဤသို့ဖြင့် ထွေးထွေးသည် ကိုကိုနှင့်လင်ငယ်ထားပြီးအခွင့်အရေးရတိုင်းအလိုးခံနေသည်မှာ ၆ လပင်ပြည့်လုနေပေပြီ။တစ်နေ့တွင်တော့ ထွေးထွေး၏ယောက်ကျားနောက်လတွင်ခွင့်တစ်လယူ၍ပြန်လာတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်းဖုန်းရလေသတည်း။ ပြီးပါပြီ…..
“မရဘူး၊ မရဘူး၊ ထပ္မထုတ္ေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ခု နင္ၾကိဳယူထားတာ ႏွစ္လ စာေတာင္ရွိျပီ။ ေျပာလိုက္ နင့္အေမကို မရေတာ့ဘူးလို႔၊ လကုန္မွ ထပ္ေပးႏိုင္မယ္၊ ခု လကုန္ဘို႔ ၂ ပတ္ေတာင္လိုေသးတယ္၊ မေပးႏိုင္ဘူး” မ်က္ႏွာငယ္ေလးျဖင့္ က်ဳပ္မိန္းမ ေျပာသမွ် နားေထာင္ေနေသာ ခင္ဝိုင္းက ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ ေခါင္းသာ အသာညိတ္ျပသည္။ ခင္ဝိုင္းတို႔ မိသားစု အားလံုး အလုပ္လုုပ္ၾကေသာ္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ ေလာက္ငသည္ မရွိ။ ခုလဲ သူ႔အေမက သူ႔လခ တလစာ ထပ္ၾကိဳထုတ္ခိုင္းသည္ဟု ခင္ဝိုင္းကေတာင္းသျဖင့္ က်ဳပ္မိန္းမက မေပးႏိုင္ဘူး ျငင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ က်ဳပ္သိသေလာက္ ခင္ဝိုင္း တို႔ မိသားစုမွာ ဖခင္က ဆိုက္ကားနင္းစားေသာ္လည္း အရက္သမား။ သူရွာသည့္ေငြက သူ႔အရက္ဖိုးျဖင့္ေတာင္ မေလာက္ခ်င္။ မိခင္ကေတာ့ ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုး ေစ်းသည္ ဆိုေပမဲ့ […]
ေအး…လူတစ္ေယာက္ဟာ ကာမေရာဂါ စြဲကပ္လာရင္ ဒီေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ေဆးမရွိဘူးလို႔….ဆိုလိုတာေပါ့ကြာ…အဲ…ဒါေပမဲ့…. မိမိရဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ဆမႈ မရွိျခင္းကေတာ့ ကာမေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္း ေစတဲ့ အလြန္အစြမ္းထက္တဲ့ ေဆးပါဘဲတဲ့…..” “…..ေႀသာ္.. ဟုတ္ကဲ့…အဘ သာလွ… ဒါနဲ႔…လကၤာမွာ ေဆးမရွိဘူးလို႔လဲ ဆိုတယ္. …မဟာႀသသဓေဆးမည္စြလို႔လဲဆိုတယ္….ဒီအဓိပၸါယ္ကို က်ဳပ္ေကာင္းေကာင္း မသိဘူး အဘ…အဲဒါလည္း ရွင္းျပပါအံုး….” “….ေအး..ေအး…နားလည္သေလာက္ ရွင္းျပရတာေပါ့ ကြာ…အဆင္း..အသံ.. အန႔ံ အရသာ… အေတြ႔…ဆိုတဲ့… မင္းတို႔ငါတို႔ေတြထိခံစားေနတဲ့ သဘာဝရုပ္ဓာတ္ေတြ ကို အာရုံလို႔ေခၚသကြ….ဒီအာရုံငါးမ်ိဳးဟာ ကာမစိတ္ဓာတ္ကို တိုးပြားေစတတ္လို႔ ကာမဝတၳဳ……ကာမအာရုံလို႔ေခၚတယ္… ဒီျပင္ပက ကာမဝတၳဳနဲ႔ အဇၩတၱက ကိေလသာ ေပါင္းဆံုမိတဲ့အခါ ကာမေရာဂါေတြ အဆင့္ဆင့္တိုးပြားလာေတာ့တာဘဲ ……..တိုးပြားရုံတင္မကေတာ့ဘူး…ေမာင္…ေရ…တျဖည္းျဖည္းေရာဂါက…ရင့္ရင့္ လာတယ္…..ေအး…အဲဒီလို စိတ္ထဲမွာ ထၾကြေသာင္းက်န္းလာတဲ့ ကာမေရာဂါကို ကုသဖို႔ ျပင္မမွာ ေဆးမရွိဘူးလို႔ ေျပာတာ…”“…..ေၾသာ္…..ေၾသာ္….” […]
အခ်ိန္မွာ ည ၁၀ နာရီခန႔္ ရွိၿပီျဖစ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး တိတ္ဆိတ္စ ျပဳေနေပၿပီ။ ေက်ာ္ညြန႔္တစ္ေယာက္ ေန႔လည္က ၾကည့္ခဲ့ေသာ ဗြီဒီယိုေအာကားကို ျပန္သတိရၿပီး လီးေတာင္ေနေလသည္။ ယခုတေလာ ေအာကား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကည့္ျဖစ္ေနေသာ သူ႔အာ႐ုံတြင္ ျပန္စဥ္းစားလိုက္တိုင္း ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတို႔ လိုးပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းပင္ ျပန္ျမင္ေယာင္တတ္သည္။ သူေနသည့္ ေနရာႏွင့္ အနည္းငယ္ ေဝးေသာ ကားလမ္းမႀကီးေဘးရွိ အိမ္တစ္အိမ္မွာ ဗြီဒီယို ေအာကားခ်ည္းျပေလရာ တစ္ခါ ၾကည့္ဖူးသြားေသာ ေက်ာ္ညြန႔္တစ္ေယာက္ မၾကာမၾကာ ၾကည့္ျဖစ္ေနေလသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဗြီဒီယို႐ုံမ်ား ေပၚလာၿပီး ေအာကားသက္သက္ ျပစားေသာ ႐ုံမ်ားတြင္ သူၾကည့္ေနေသာ ႐ုံလည္း တစ္႐ုံ အပါအဝင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႐ုံႏွင့္ ထိုကားမ်ားေၾကာင့္ အသက္အစိတ္ နီးေနၿပီျဖစ္ေသာ […]